ओटिटीमा व्यस्त जावेद जाफरी | साहित्यपोस्ट
ओटिटीमा व्यस्त जावेद जाफरी
इन्डिया टुडे	 प्रकाशित ३१ बैशाख २०७९ १६:०३
जावेद जाफरीलाई धेरैले पहिले सहनायकको अवतारमा देख्ने गर्थे । कहिलेकाहीँ हास्य अभिनेताका रूपमा पनि परिचय जमाए । जब भारतमा ओटिटी प्लेटफर्मले आफ्नो गोडा फैलाउन थाल्यो, त्यसमा पनि उनले आफ्नो हुनरलाई विस्तार गर्न चुकेनन् ।
यतिबेला उनको जिटिभीको ओटिटी जि ५ मा नेभर किस योर बेस्ट फ्रेन्डको चर्चा भइरहेको छ । अर्कोतर्फ डिज्ने प्लस हटस्टारमा उनको इस्केप लाइभ शृङ्खलाको पनि उत्तिकै चर्चा छ ।
यसै विषयमा आधारित रहेर इन्डिया टुडेले उनलाई सोध्योः
सोसल मिडियामा आधारित शृङ्खलाको निकै चर्चा छ, इस्केप लाइभको । सोसल मिडियासँग चैँ तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ ? कत्तिको समय त्यहाँ बिताउनु हुन्छ ?
म खासै त्यसमा समय खपाउँदिनँ । बरू ट्वीटरमा बढी समय दिन्छु । हिजोआज त्यहाँ पनि मन बाँधिन सकेको छैन किनभने त्यहाँ धेरै नकारात्मकता छ ।
कलाकारले सन्देश नै दिनुपर्छ भन्ने छैनः शेफाली शाह
इन्डिया टुडे	 १२ चैत्र २०७८ ११:४३
जयपुर लिटरेचर फेस्टिभलकी संस्थापकको नयाँ उपन्यास
इन्डिया टुडे	 ५ पुष २०७८ १३:०१
अचेलका युवा छाप्न हतारिन्छन्
साहित्यपोस्ट	 ८ कार्तिक २०७८ ००:०१
इन्डिया टुडे	 ६ कार्तिक २०७८ ००:०१
नेभर किस.. शृंखलामा तपाईंले बिट्टु मामाको भूमिकामा रूचाइनु भएको छ । त्यो चैँ इस्केप लाइभको रवि गुप्ताभन्दा निकै फरक छ नि ?
बिट्टु मामा एउटा होपलेस रोमान्टिक, निकै प्रेमिल, पन्जाबी चरित्रको कथा छ । इस्केप लाइभको रवि गुप्ता चाहिँ एउटा व्यापारी भएर सोच्ने व्यक्ति छ । त्यसैले यी दुई चरित्रमा निकै फरक पाउनु हुन्छ ।
अचेल पात्रहरूमा पहिलेको जस्तो पूरै खराब वा पूरै असल चरित्र हुन छाडे । को गुन्डा र को हिरो भन्ने नै भेउ पाउन छाडिसके दर्शकहरूले । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?
फिल्ममा चाहिँ तपाईंले चरित्रका सेड्स (छायाँ)हरू देखाउने समय पाउनु हुन्न । त्यसैले छोटो समयमा धेरै कुरा भन्नु पर्ने भएकाले कतिपय कुरा छुट्छन् र त्यहाँ सेवा वा कालो मात्र देखिन्छ, हिरो र गुन्डा मात्र फेला पर्छन् । तर जब आठ घण्टाभन्दा बढी समयको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मान्छेका सबै चरित्रहरूलाई पालैपिलो देखाउन सक्नुहुन्छ । फराकिलो र गहिरो कुरा त्यहाँ भन्ने मौका हुन्छ । यो नै एउटा अभिनेता वा अभिनेत्रीका लागि, क्रिएटिभ पिपुलका लागि ठूलो अवसर बन्न पुगेको छ ।
मनोरञ्जन उद्योगमा ३५ वर्षभन्दा बढी समय बिताउनुभयो । कहाँ पुग्न चाहनु भएको थियो ?
अहिले सोच्दा, मैले सोचेभन्दा बढी पाएँ कि जस्तो लाग्छ तर कहिलेकाहीँ मैले सोचेजस्तो भएन पनि लाग्छ । खासमा मानिसले बुझ्नुपर्ने चाहिँ, जे जति छ, त्यसप्रति अनुगृहित हुनु हो । यसले तपाईंलाई सभ्य र सन्तुलित बनाउँछ । मैले सबैजसो अवस्था गुजारेँ, मैले सबैजसो चरित्रहरू पर्दामा खेलेँ । जीवन पनि उथलपुथलपूर्ण रह्यो । समग्रमा नराम्रो रहेन ।
इन्डिया टुडेजावेद जाफरी